အင်္ဂလိပ်စာ ဘာကြောင့်မတတ်ကြသလဲ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » အင်္ဂလိပ်စာ ဘာကြောင့်မတတ်ကြသလဲ..
Posted by s0t04 on Aug 23, 2010 in Education, Literature/Books |4comments
– ကိုယ်တိုင် တကယ်တတ်ပြီး တပည့်တွေကို တကယ်တတ်အောင် သင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာတွေရှားနေလို့
– ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မလုံလောက်လို့။
– အင်္ဂလိပ်စာကို အချန်ယူလေ့လာမှ၊ ဖတ်သမျှနားလည်၊ ပြောချင်ရာပြော၊ရေးချင်ရာရေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ကိုရောက်မယ်၊ တကယ်တတ်မယ်ဆိုတာကို သဘောမပေါက်ကြပဲ၊ သုံးလေး ငါးလလောက်သင်လိုက်ရင် တတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ အထင်အမှားကြီးမှားပြီး ကြာရှည်မသင်ချင်ကြလို့၊ ခဏတဖြုတ်ပဲ သင်ချင်ကြလို့။
– အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မျိုးစုံဖတ်မှ တကယ်ပြောတတ်၊ ရေးတတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ နားမလည်ကြတဲ့အတွက် ၊ အင်္ဂလိပ်စာကို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မဖတ်ကြလို့။
– အင်္ဂလိပ်စာ တကယ်တော်အောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့သင်တန်း ကြာရှည်တက်ရတာတို့ အရေးလေ့ကျင့်ရတာတို့လို ကယိကထတွေကို မခံနိုင်ကြလို့။ ဇွဲမရှိလို့၊ တချို့ကြတော့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက်ရေးအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ မခံနိုင်ကြလို့၊ ဒါမှမဟုတ်မခံချင်ကြလို့။
– တချို့ကတော့ ဘာအလုပ် ညာအလုပ် ရှုပ်နေကြပြီး အင်္ဂလိပ်စာ တတ်မြောက်ရေးအတွက် အချိန်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ကြလို့။
– အချုပ်ကတော့ တတ်သာတတ်ချင်ကြပြီး တကယ်တတ်အောင် ဒုက္ခမခံနိုင်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
– အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မျိုးစုံ အသံထွက်ဖတ်ပါ။ လွယ်တာတွေ စဖတ်ပါ။
– အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ကြာကြာတက်ပါ။ အလုပ်များရင် ခဏနားပြီး အားတော့ဆက်တက်ပါ။ တော်ရုံတန်ရုံ အလုပ်များရုံနဲ့ သင်တန်းမရပ်ပါနဲ့။
– အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခွေတွေကြည့်ပါ နားထောင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်ရေဒီယို နားထောင်ပါ။
– စိတ်တူသဘောတူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ပါ။ မရှက်ပါနဲ့။ တစ်ယောက်တည်းလဲ အပြောကျင့်နေပါ။(သူများတော့မကြားစေနဲ့ပေါ့)တဲ့
ကဲ.. အားလုံးပဲ တကယ်လုပ်ရင်တကယ်တတ်တာမို့ ကြိုးစားကြဖို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်…
ဟုတ်တယ်ဗျ … ဒီအာရှနိုင်ငံတွေက အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာကို ပြောတတ်သလို ပြောနေကြတာခက်တယ်။ ကိုယ်က အမှန်အကန် ပြောချင်ရင်တောင် သူတို့က နားမလည်ကြတော့ noun & verb လောက်ကိုပဲ အဓိက ထားပြီး ပြောနေရတယ်။ ကြာကြာနေရင် ကိုယ်လည်း အင်္ဂလိပ်စကား အကျိုးအပဲ့ သုံးတဲ့ ဘဝကကို တက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ယူ အန်ဒါစတန်း လား?
ဟုတ်ပါတယ် …၃ လ ပြတ် ၄လပြတ် တွေနဲ့ တော့ အချဉ် မမိကြ ပါစေနဲ့။ ကျနော် တို့ ငယ်ငယ် တုန်း က တော့ လှည်း တန်း က ဆရာ ကြီး ဦးခင်မောင်လတ် ..
ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် တို့ဆီမှာ နှစ် ရှည် လများ တက် ခဲ့ ရပါတယ်။ အဲဒီ တုန်း ကတော့ တလ ၁၀ ကျပ် ပေါ့။ ဘာသာ ရပ် တခု ဟာ အခုလိုချင် အခု ထလုပ်လို့ မရဘူး
ဆိုတာ သတိပြု ကြပါ ။ ဇွဲ ရှိမှ ရပါ မယ်။
ယူအက်စ်မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကျတော့ ဗမာစာ ဘာ့ကြောင့်မတတ်ကြသလဲမေးရမယ်။
မပြောမရှိတဲ့..တနှစ်တနှစ် မြန်မာ-အမေရိကန် က ထောင်ချီ၊ နောက်နှစ်တွေဆို သောင်းချီမွေးထုတ်နေမှာ….အကုန်လိုလို ဗမာစာမတတ်တာတွေဖြစ်နေတာများတယ်။
စာဆို တော်တော်ဝေးပါတယ်။ မြန်မာစကားကို မပြောကြတာ ဆိုးတယ်…။
အဲဒါ…မြန်မာပြည်တွင်းက …တတ်သိပညာရှင်တွေမှာ …နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာ..သေသေချာချာ ပလင်န်တခုခုမရှိရင်…အဲဒီလာမဲ့ဂျန်နရေးရျင်းတွေအတွက်..ရင်လေးစရာပါ။ မြန်မာလူမျိုးအတွက်.ရင့်နင့်စရာပါ။
မြန်မာလူမျိုးက မြန်မာပြည်အပြင်မှာ အနည်းဆုံး ၄သန်းေ၇ာက်နေတော့…တနှစ်တနှစ် သိန်းချီထွက်နေတဲ့…ဗမာဇာတိနွယ်တွေပဲမို့ ပါပဲ။
နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ရှိသမျှပါဝါတွေ အာဏာအလွှဲအပြောင်းကိစ္စအ၀၀မှာနှစ်ထားရတော့ လုံးဝဆိုလုံးဝ ဒီလို အခြေခံလူမှုရေးတွေကို မကူနိုင်မစဉ်စားနိုင်ပါပဲ။
Where do you go? = you go where?
What did you eat? = you eat what?
No = No lar
Yes = Yeah lar
Of course = Of course lar
Have you finish your lunch? = finish Makan ?
Can you do this job? = Can lar?
Do you understand what i mean? = understand or not?